Sheekh Shariif oo waddo cusub u furay siyaasiyiinta | KEYDMEDIA ENGLISH
Sheekh Shariif oo waddo cusub u furay siyaasiyiinta
Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ayaa ka qeyb qaatay, dadaallada bani'aadamnimada ee kor u qaadaya gargaarka dadka abaaruhu wax-yeelleeyeen, si loo daboolo baahiyaha muhiimka ah ee bulshada danta yar.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed, ayaa noqday musharixii ugu horreeyay ee si toos ah uga qeyb qaata gurmadka dadka abaarahu saameeyeen, kadib kulan uu maanta la qaatay Guddiga Qaran ee Gurmadka Abaaraha.
Hoggaamiyaha Xisbiga Himilo Qaran, Sharif, ayaa xaqiijiyay inuu guddiga ku wareejiyay lacag 20.000 oo dollar ah, uu uga qeyb qaadanayo gurmadka lagu garab istaagayo bulshada ay sida daran abaaruhu u saameeyeen.
“Waxaan la kulmay guddiga Qaran ee Gurmadka Abaaraha ee uu dhowaan magacaabay Ra'isulwasaaraha XFS, Waxaan ku wareejiyay lacag aan uga qeyb qaadanayno gurmadka abaaraha”. Ayuu yiri MW, Shariif.
Guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka wax haysta, ayuu ugu baaqay in ay ka qeyb qaataan gurmadka abaaraha, wuxuuna soo jeediyay in la badiyo Alle bariga iyo salaadda si Alle nooga dulqaado abaarahan.
Tallaabada uu qaaday Madaxweynihii hore Shariif, ayaa noqon karta mid ay ku daysadaan dadka wax heysta, xilli ay xusid mudan tahay, in Farmaajo oo sifo sharci-darro ah ku sheegta xilka MW Soomaaliya, uusan wali qaadin tallaabo muuqata.
Saameynta abaaraha ee Soomaaliya ayaa sii kordhay, qiyaastii 4.3 milyan oo qof ayay hadda saamaysay, tirada dadka ku barakacay abaarta ayaa labo jibaarantay, kalia bishaan, waxayna gaartay, 554,000.
Qiyaastii 3.6 milyan oo qof ayaan haysan biyo ku filan, qiimaha badeecadaha aasaasiga ah ayaa aad u kordhay, carruur badan ayaa ka baxaya iskuullada xilli bulshooyinku baadi goobayaan baad iyo biyo.
In ka badan 1.4 milyan oo carruur ah, ku dhawaad ​​kala bar ilmaha da'doodu ka yar tahay 5-ta sano, ayaa la saadaalinayaa in ay sanadkaan soo waji doonto nafaqo-xumo ba'an, xilli ay hadda marba mark aka danbeysa sii kordheyso tirada.